China 3M Deluxe Pro Angler hanao kayak orinasa sy ny mpanamboatra | Oceanus
ANKIZY hanao kayak
MITAIZA IRERY NY hanao kayak
FIANAKAVIANA hanao kayak
JONO hanao kayak
SUP NY BIRAO
Mipetraka eo amin'ny hanao kayak
mangarahara hanao kayak
10ft tokan-tena hanao kayak pedal
Fanaratoana 13ft hanao kayak
4m Deluxe Pro Angler hanao kayak
3M Deluxe Pro Angler hanao kayak
tandem hanao kayak
2.78m Lady Gaia hanao kayak
2.8m tokan-tena hanao kayak
Tanora 2.4m hanao kayak
Product Description: 3M Deluxe Pro Angler hanao kayak dia mazava ao amin'ny lanja sy mora entina. Ity tahirin hanao kayak ny toerana izay fitaovana herinaratra .Seat maotera toerana dia mety hametraka bateria hamonjy be dia be ny toerana ho an'ny lavitra. Malagasy Parts: 1 * Deluxe Aluminum ...
Ara-nofo: LLDPE / UV mahatohitra
Grow Weight: 25kgs
20'ft fitoeran-javatra fahaiza: 40pcs ity hanao kayak
40'HQ fitoeran-javatra fahaiza: 100pcs ity hanao kayak
3M Deluxe Pro Angler hanao kayak dia mazava ao amin'ny lanja sy mora entina. Ity tahirin hanao kayak ny toerana izay fitaovana herinaratra .Seat maotera toerana dia mety hametraka bateria hamonjy be dia be ny toerana ho an'ny lavitra.
1 * Deluxe Aluminium Seza
3 * Multi tehina mpihazona
5 * Big anoloan'ny foy
1 * Life tady
1 * tatatra plug
1 * kaopy mpihazona
8 * D-peratra ny bokotra
1 * mainty bungee
2 * mitondra famohana
1 * Electric maotera toerana mpihazona
Payment Terms: A): 30% petra-bola T / T mialoha, 70% fifandanjana an'i BL dika mitovy;
B): 100% T / T mialoha, ny santionan'ny didy.
Delivery: amin'ny ranomasina ho any amin'ny mpanjifa ny seranana akaiky indrindra, ny fotoana manokana dia ambany ny tena.
Q: Ny vidiny dia mety miova miankina amin'ny tena sy ny fomba kayaks dia be. Dia handefa anareo nohavaozina vidiny lisitra araka ny orinasa Contacts anay Raha mila fanazavana fanampiny.
Q: Eny, matetika, ny MOQ iray feno 40'HQ 20'ft na fitoeran-javatra. Mazava ho azy fa raha toa ka mila iray na maromaro, dia ekena ho antsika. Hahafantatra bebe kokoa ny antsipiriany, dia mifandraisa aminay.
Afaka mividy karazana fitoeran-javatra iray kayaks ao?
Mazava ho azy, lazao amiko fotsiny ny hanao kayak karazana sy ny ilainao dia be izahay, dia hanampy anao hamaritra ny farany dia be amin'ny alalan'ny kajy.
Na ny manaiky ny mpanjifa ny LOGO?
Eny, afaka printy ny LOGO ny Hull ny kayaks.
Inona no loko mety ho azo?
Q: Single loko sy ny loko Mix azo atao.
Ahoana no feno ny vokatra?
Package Details: sosona fefy iray kitapo, baoritra iray metatra ny lavany eo amin'ny farany ambany, ary ny anankiray sosona harona plastika. Mazava ho azy, dia afaka ihany koa ny entana kayaks araka ny fepetra.
Q: Lead fotoana: 1-2 andro mba ho santionany, 7-10days isan-20'ft fitoeran-javatra, ary ny 40 isan-10-15days 'HQ fitoeran-javatra rehefa mahazo petra-bola.
Nahoana no hifidy Blue Ocean hanao kayak ho toy ny mpamatsy Factory?
OEM fanompoana tsy ampy, Maherin'ny 10 taona traikefa, tsara indrindra-mijanona eny ifotony asa, telo taona fiantohana ny hanao kayak Hull, Professional ekipa miasa mba hanompo anareo, fanohanana ara-teknika sy taorian'ny asa varotra.
Ahoana no Manome toky ny entana ny toetra?
Ny orinasa mpamokatra entana dia manana dingana maromaro maso lisitra izay hiantohana ny kayaks hihaona ny fitsipika tsara. Water fitiliana dia tsy maintsy atao eo anoloany ny nahafono.
Hametraka Fittings mijery, Accessories jereo dia ny tsy maintsy atao alohan'ny fonosana. Ny dingana famokarana nanao antsika telo jereo ny hanao kayak ho an'ireo orinasa mpamokatra entana zavatra hafahafa.
Warranty dia 3 taona eo amin'ny Hull, 6 volana ho an'ny Fittings, ary ao anatin'ny 24 ora valiana mba hamaha ny olana.
Previous: tandem hanao kayak
Next: 4m Deluxe Pro Angler hanao kayak
2 Olona Fishing hanao kayak
Double Fishing hanao kayak
Nanjono hanao kayak Amin'ny Aluminum Seza
Nanjono Single pedal hanao kayak
Single Sit Top hanao kayak Fishing hanao kayak
3.6m Fishing hanao kayak amin'ny Aluminium Seza
Hiditra niakatra ho any Blue Ocean ny gazetinay amin'ny mailaka hanao kayak ka ho ny voalohany ho fantatra momba ny vaovao farany, tolotra manokana, sy ny zava-mitranga.